Soo dejisan Paint.NET 4.0.6 – Vessoft
Software Tani loo baahan yahay .NET Framework si saxda ah loo hawlgeliyo
Soo dejisan Paint.NET
Paint.NET waa editor graphic lacag la’aan ah oo images iyo sawiro, kaas oo la horumariyay on a. Boosteejo Framework NET. In editor Paint.NET ku dhafan oo dhan saamaynta caadiga ah stylization, aqshadeeye, la saxo, Distortion of images, sawiro iyo dheeraad ah. Waa suurto gal in download saamaynta dheeriga ah iyo qalab si ay ula images ama photos shaqeeyaan. Tallaabo kasta oo la sameeyaa in a editor garaafyada waa la diiwaangeliyey iyo waxa laga yaabaa in la kansal daaqada taariikhda. Faa’iidada buuxda ee Paint.NET waa intii ayna for dual iyo Bawdada-core.
The sifooyinka ugu muhiimsan ee
Go'an A awood qalabka
Taageerada lakab oo ka shaqeeya
Aaragtida laga bilaabo 1% ilaa 3200%
La shaqeynta files duwan oo isku mar
Updates soo noq si loo hagaajiyo kartida
La shaqeynta ka scanner iyo сamera
Optimized isticmaalo, waxa uuna ku Bawdada-core
Comments on Paint.NET:
Paint.NET Software la xiriira:
Photo qalab The in sanamyadooda la shaqeeyaan iyo abaabulo sawirada. software The kuu ogolaanayaa inaad si edit sanamyadii, codsan saamaynta kala duwan oo ku daabacaan adeegyada caanka ah.
English, Français, Español, Deutsch... FastStone Image Viewer 5.9
العربية, English, Українська, Français... Krita 3
العربية, English, Українська, Français... PhotoFiltre 10.11
Photo Editor Graphic la set ka mid ah qalabka ku haboon in ay ka shaqeeyaan sanamyadooda. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u isticmaalaan processing Dufcaddii marka la isticmaalayo miirayaasha.
Photo Tool in ay ka shaqeeyaan sanamyadooda iyo sawiro. Software ka kooban filtarrada badan oo kuu ogolaanaya in aad ku darto saamaynta kala duwan ama abuuro mashaariic si toos ah.
Helitaanka Remote Software ayaa u helaan in ay macluumaadka ee computer ka fog ama qalab. Software wuxuu isticmaalaa tallaabooyinka ammaanka iyo program oo adag si ay u ilaaliyaan macluumaadka.
Wise Disk Cleaner 9.31 Standard iyo Portable
العربية, English, Українська, Français... Microsoft Security Essentials 4.9.218
Antiviruses Software antivirus buuxda ka Microsoft. Adda ka ilaaliyaa habka ka dhanka ah fayrasyada ee noocyada kala duwan, spyware iyo hanjabaado kale.
English, Українська, Français, Español... GPU-Z 1.11
Imtixaanka Software si ay u ururiyaan macluumaadka faahfaahsan oo ku saabsan kaarka video, processor, naqshadeynta card iyo waxyaalo kale. Software ayaa u saamaxaaya in ay arkaan iyo culayska ay ku processor ka naqshadeynta tijaabiso.